An-tserasera web Cam Brezila
Ny webcam mampiseho ny faritra atsimon’ny Copacabana amoron-dranomasina (izay no Fort Copacabana). Indraindray ny fakan-tsary dia nitarika ho mahaliana ny zava-nitranga dia ao anatin’ny fomba fijery, ohatra, tamin’ny taombaovao afomanga. Webcam mampiseho ny voankazo feeder ho an’ny vorona ao amin’ny Atlantic ala mando. Ny fakan-tsary dia nametraka tany amin’ny faritra Atsimon’i Brezila tao amin’ny tanàna kely Morris. Izany feeder tonga mba hihinana maro ny karazan ny vorona any amin’ny tany mafana. Web fakan-tsary nametraka tao amin’ny Atlantic ala mando any Brezila sy mampiseho ny vorona Kôlibria. Izany mpisotro afaka mahita ny Kôlibria dimy ambin’ny folo isan-karazany. Webcam mampiseho ny vorona feeder amin’ny trano fandraisam-bahiny. Mba hihinana ny vokatra avy ny mofonao foana manidina isan-karazany mamirapiratra mafana ny vorona. Webcam mampiseho amin’io fomba fijery avy amin’ny faran’ny amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena ny iray amin’ny malaza Siramamy mofo tendrombohitra ao ambadika. Web fakan-tsary nametraka teo amin’ny tora-pasika malaza fialan-tsasatra Guaruja (San Paolo, Brésil). Amin’io fomba fijery ny ranomasina, amoron-dranomasina sy an-tendrombohitra.
Ny voalohany mampiseho malaza Webcam. Brezila, feno ofisialy endrika Federative Repoblika Brezila ny lehibe indrindra ao amin’ny faritra sy ny mponina ao Amerika Atsimo sy ny ihany no miteny portioge kaontinanta Amerikana. Faritany, km, izay, avy amin’ny faritra rehetra ety an-tany. Brezila no fahadimy lehibe indrindra amin’ny firenena, eo amin’izao tontolo izao amin’ny faritra sy ny eo amin’ny lafiny mponina. Ny sasany an-tserasera web mpitandro ny fakan-tsary afaka mijery miaraka ny feo. Raha mbola variana mandinika ny zava-misy fa ny feo nalefa azo alefa amin’ny default. I, koa, mandritra ny fotoana mijery sy mankafy, ary koa aho manonofy mahita ity tanàna tsara tarehy rehetra, ny hatsaran-tarehiny, nefa mba jereo fotsiny ny sary sy ny fakan-tsary. Misaotra anao noho ity tranonkala ity.
Nandritra ny ela be mijery, midera ny fanaovana fanatanjahan-tena. Ny nofiko, dia ny mandeha any, ary hankafy izany rehetra izany hatsaran-tarehy.
Tena mahaliana, fa miala tsiny ny fandroana foana dia tsy niova ny fotoana sy ny amin’izao fotoana izao efa tsy misy fifandraisana aho, ary jereo raha tsorina dia fakan-tsary ity dia tena tsara kalitao dia toy izany MISAOTRA betsaka ANAO noho ity fahagagana iray tsara Tarehy, tsara toetra. Na izany aza, misy dikany Webcam, dia velona indray ny sasany minitra, tsy azoko mihitsy. Ny zavatra mitovy fotsiny ny sary mba hijery. Ry Basile, isika dia efa miasa ao amin’ny izany. Ny tanjona ao amin’ny hoavy tsy ho ela mba hanehoana amin’izao fotoana izao. Ny olana amin’izao fotoana izao fa ny hafainganam-pandehan’ny Aterineto ao Brezila raha izany dia tsy raisina an-tànana.
Na Amin’inona, Christoph
Dia mampiaraka ny lahatsary amin'ny Chat online, Brezila, hihaona zazavavy teo amin'ny faha-roa-polo amby enin-polo amby dimam-polo taona →
© 2019 Ny Lahatsary Amin'ny Chat Brezila